भुइँचालो, संविधान र नाकाबन्दीमा लेखिएको... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
भुइँचालो, संविधान र नाकाबन्दीमा लेखिएको '७२ को विस्मय' सार्वजनिक
पत्रकार तथा लेखक बसन्त बस्नेतद्वारा लिखित '७२ को विस्मय' पुस्तक शनिबार विमोचन गरिँदै। तस्बिर: सेतोपाटी
पत्रकार तथा लेखक बसन्त बस्नेतले २०७२ सालका तीन महत्वपूर्ण घटना भुइँचालो, संविधान र नाकाबन्दीको सेरोफेरोमा लेखेको '७२ को विस्मय' पुस्तक शनिबार सार्वजनिक भएको छ।
देशका प्रथम राष्टपति डा. रामवरण यादव, राष्टिय जनता पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता मोहना अन्सारी, नयाँ शक्तिका संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई, नेकपा नेता तथा पूर्वसभामुख सुवास नेम्बाङ र लेखकले संयुक्त रुपमा पुस्तक विमोचन गरेका हुन्।
कार्यक्रममा प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवले यो पुस्तक देश र मधेस बुझ्न उपयोगी हुने बताए। संविधान निर्माणका केही विधि र प्रक्रिया आफूलाई चित्त नबुझेको अवस्थामा समेत मधेसलगायत क्षेत्रका समस्या समाधानका लागि आफूले पहल गरेको उनले उल्लेख गरे। संविधानमा रहेका गुनासा र असन्तुष्टि विस्तारै सम्बोधन हुँदै जानेमा आफू आशावादी रहेको उनको धारणा छ।
राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष ठाकुरले २०७२ सालमा भएका घटनाका विषयमा लेखकले तटस्थता प्रस्तुत गरेको बताए। मधेस आन्दोलनका समयमा भएका घटनालाई यथार्थपूर्ण किसिमले प्रस्तुत गरिएको उनको भनाइ छ।
मधेसमा भएको भेदभावविरुद्ध आन्दोलन भएको र त्यसलाई पुस्तकले उजागर गरेको उनले बताए। मधेसमा अझै असन्तोष र असन्तुष्टि व्याप्त रहेको र यी विषयको समाधान नभएसम्म कुनै पनि समयमा विस्फोट हुन सक्ने उनले उल्लेख गरे। संघीयता आइसकेपछि पनि प्रदेशमा अझै केन्द्र सरकारको मनोमानी भएको उनले बताए।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगका प्रवक्ता अन्सारीले यो पुस्तकले तेस्रो मधेस आन्दोलनलाई तथ्यपूर्ण ढंगमा उजागर गरेको बताइन्। मधेसमा बस्ने जाति, समुदाय एवं इतिहासको विषयमा बडो रोचक प्रस्तुति गरिएको उनको भनाइ छ।
पूर्वप्रधानमन्त्री डा. भट्टराईले लेखकले जोखिमयुक्त विषयमा कलम चलाएको बताए। यस्तो गहन र वर्जित विषयमा कसरी हात चलाए होलान् भन्ने लागेको उनको भनाइ छ। यति ठूलो संघर्षबाट ल्याइएको संविधानप्रति नेपालको एउटा ठूलो तप्का असन्तुष्ट रहेको उनको धारणा छ।
नेपालका जातीय, क्षेत्रीय, महिलाको क्षेत्रमा, पिछडिएका पक्षमा बोल्नेलाई अझै पनि डलरवादीको आरोप लाग्ने गरेको उनले बताए। यस्ता विषयमा सबै संवेदनशील हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए। लेखकले पुस्तकमा मधेस आन्दोलन, थारु आन्दोलन एवम् मुस्लिमहरुका विषयलाई समेत समेटेको उनले बताए।
नेपालमा दलित, उत्पीडित, जनजातिका माग सम्बोधन नहुँदासम्म विकासको कल्पना गर्न नसकिने उनको भनाइ छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा आएका व्यक्तिलाई पनि संविधान निर्माणका समयमा आफूले 'यू आर टू लेट' भनेर प्रतिक्रिया दिएको उनको सुनाए।
पूर्वसभामुख नेम्वाङले मधेस आन्दोलन, नाकाबन्दी र भूकम्पजस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा पुस्तक लेखेकोमा लेखकलाई बधाई दिए। पुस्तकमा संविधान, नाकाबन्दीका विषयमा उठेका अनेक शंकाउपशंका र मधेस आन्दोलका सूक्ष्म विषयलाई रोचक किसिमले प्रस्तुत गरिएको उनले बताए। भूकम्पले सबैतिर क्षति गरेको बेला छिमेकीले नाकाबन्दी गर्ला भन्ने आफूले कहिल्यै नसोचेको र अहिले पनि त्यसमा विश्वस्त नरहेको उनको भनाइ छ।
कार्यक्रममा लेखक बस्नेतले आफूले कान्तिपुरका लागि रिपोर्टिङ क्रममा देखेका अनुभूति पुस्तकमा समेटेको बताए। पुस्तक फाइनप्रिन्टले प्रकाशनमा ल्याएको हो। मोटो गाता भएको पुस्तकको ६०० र पातलो गाता पुस्तकको ५५५ रुपैयाँ मूल्य छ।
प्रकाशित मिति: शनिबार, भदौ २३, २०७५, ११:५४:००